Ciidanka Xoogga dalka oo sheegay inay howlgal ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab +(Magacyadooda) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidanka Xoogga dalka oo sheegay inay howlgal ku dileen xubno ka tirsan...
Ciidanka Xoogga dalka oo sheegay inay howlgal ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab +(Magacyadooda)
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay howlgallo ka dhan ah Maleeshiyaadka Al-Shabaab ka fuliyeen tuulooyin hoostaga Bariire.
Ciidanka Xoogga dalka ayaa ka ruqaansaday deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeelaha Hoose, iyagoo xooraan ku helay in Tuulooyinka Balow iyo Nuunaay ay soo galeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya, in ciidanka xoogga dalka ay howlgalkaasi ku dileen labo ruux oo ka tirsan Al-Shabaab, sida ay baahisay warbaahinta Ciidamada.
Taliyaha ururka 143 ee Ciidanka Xoogga dalka Dhamme Axmed Xasan Siyaad oo la hadlay Warbaahinta Ciidamada ayaa sheegay in Howlgalka lagu dilay Abaandulihii Howgalinta Al-Shabaab iyo Madaxii zakawaadka Shabaab ee gobolka Shabeellada hoose.
Labada labada ruux ayuu Taliye Axmed waxa uu Magacyadooda ku kala sheegay Ciise Timaweyne oo ku magac dheer (Abuu dheere), waxa uuna Al-Shabaab u qaabilsanaa xilka abaanduulaha howlgalinta Al-Shabaab iyo Qooreey oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Zakawaadka gobolka.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka Ururka Al-Shabaab oo ku aadan in ciidanka xoogga dalka ay dileen Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaabb lagu dilay howlgal
Ciidanka xoogga dalka